နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: October 2010
ပန်းရောင် မြို့တော်သို့ တစ်ခေါက်
အရင်အပတ် စနေနေ့ညက Chandigah ကနေ Jaipur ကို ညရထားနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ချန်ဒီဂါက ည ၉ နာရီမှာ ထွက်တဲ့ ရထားက ဂျိုင်ပါ ကို မနက် ၇ နာရီ ခွဲလောက်မှာ ရောက်ပါတယ်။ ဘူတာရုံက နားနေခန်းမှာပဲ မျက်နှာသစ်၊ ရေချိုးချင်တဲ့ လူက ရေချိုး၊ မနက်စာ စားပြီး တော့ ဘတ်စ်ကားနဲ့ မြို့ထဲကို သွားပါတယ်။ ပထမ သွားမယ့် နေရာက အောက်က ပုံမှာ ရိုက်ထားတဲ့ Museum ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုတော့ ပြတိုက် ပိတ်ထားတာနဲ့ မဝင်ခဲ့ရပဲ အပြင်ကပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး နောက်တစ်နေရာကို သွားပါတယ်။
Jaipur မြို့ကို ၁၇၂၇ မှာ မဟာရာဂျာ Jai Singh က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အခုအခါမှာတော့ Pink City ရယ်လို့ ထင်ရှားပါတယ်။ တစ်မြို့လုံးမှာ ရှေးဟောင်းလက်ရာ အုတ်ရောင် အဆောက်အအုံတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
နောက်ထပ် သွားတဲ့ နေရာကတော့ Jantar Manar ပါ။ ၁၇၂၈ မှာ Savaii Singh က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နက္ခတ္တဗေဒ ကို လေ့လာဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နာရီကစလို့ ကြယ်၊ ဂြိုဟ် အသွားအလာ၊ ရာသီစက်ဝန်း အပြောင်းအလဲ၊ နေကြတ်၊ လကြတ် စတာတွေကို တွက်ချက်ဖို့ ကိရိယာပေါင်း ၁၃ ခု တည်ဆောက်ခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ Guide က ရှင်းပြပေမယ့် နေကလည်း အရမ်းပူနေ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ဇောကလည်း များနေတော့ ဘယ်ဟာက ဘာဆိုတာ သေချာတော့ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီအဝိုင်းကြီးကတော့ နာရီပါ။ အရိပ်ကျနေတဲ့ နေရာလေးက လက်ရှိရောက်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ Local time အရ အတိအကျ မှန်ပါတယ်။ ပုံမှန် indian စံတော်ချိန်နဲ့တော့ မိနစ် အနည်းငယ် ကွာပါတယ်။
အောက်ကလို ပုံစံမျိုးနှစ်ခု ရှိပါတယ်။ နေအသွားအလာ တွက်ချက်တာနဲ့ မိဿ၊ ပြိဿ၊ ဓနု စတဲ့ ရာသီခွင် အပြောင်းအလဲကို တွက်ချက်တာပါ။
နောက်ထပ် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဆိုပြီး ရပ်ပေးတဲ့ နေရာကတော့ Jal Mahal ပါ။ ရေလည်က နန်းတော်လို အဆောက်အအုံကို လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ Man Saggar Lake ရဲ့ အလည်က နွေရာသီ နန်းတော်ပါ။
အဲဒီနောက် စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှ နေ့လည်စာ အတွက် ရပ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ တောင်တက်လမ်းကို ဆက်သွားကြပါတယ်။ အောက်က ပုံတွေကတော့ နောက်က ကားအကြီးကို စောင့်ရင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ရိုက်ဖို့ ဆိုပြီး ရပ်ပေးတဲ့ နေရာကနေ ရိုက်ထားတာပါ။ ကိုယ်တို့က ကားအသေးနဲ့မို့ အရင်ရောက်နှင့်နေတာပါ။
တောင်ပေါ်ရောက်တော့ ရှည်လျားတဲ့ တံတိုင်းကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှန်းလည်း သေချာတော့ မသိပါဘူး..။ နေကပူ ပင်လည်း ပင်ပန်းနေကြပါပြီ။ အခု ရှာကြည့်တော့ Nahargarh Fort လို့ ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေရာကတော့ Amber Fort လို့ထင်ပါတယ်။ သေချာတော့ မသိဘူး။ မန္တလေးတောင် တက်သလိုပဲ အပေါ်ကို ဂျစ်ကားနဲ့ သတ်သတ် ထပ်တက်ရပါတယ်။
အဲဒီကပြန်တော့ အိန္ဒိယ အမှတ်တရ ပစ္စည်း၊ ဒေသထွက် အဝတ်အထည်တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရပ်ပေးပါတယ်။ ဈေးလည်းနည်းနည်းကြီးတော့ ဘယ်သူမှတော့ ဝယ်ဖို့ကို သိပ်စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ အားလုံးက ပင်ပန်းနေကြပါပြီ။ တစ်ချို့က အဲဒီလို ခရီးထွက်တဲ့ အလေ့အထ သိပ်ရှိပုံ မရပါဘူး။ အမျိုးသားတွေက အစ အတော်ပင်ပန်းတဲ့ ပုံတွေနဲ့...။ ပြောရရင် ကိုယ်ကတော့ အဲလောက်ကြီး မဟုတ်ဘူး.. ဟီး.. ခရီးသွားရရင်ကို ပျော်နေတာ ဆိုတော့ အဲလောက် ပင်ပန်းတာကတော့ အပျော့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုပဲ သွားနေတာပဲလေ...။
အောက်က ပုံက ကားပေါ်ကနေ လှမ်းရိုက်ထားတာပါ။ Hawa Mahal ဆိုတဲ့ အဆောက်အအုံပါ။
အောက်ကပုံကတော့ နောက်ဆုံး သွားခဲ့တဲ့ နေရာပါ။ မှောင်စလည်း ပျိုးနေပါပြီ။ အတွင်းအထိတောင် မဝင်ပဲ အပြင်မှာပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကပြန်တော့ MacDonald မှာ ညနေစာ ဝင်ဝယ်ပြီး ကားပေါ်မှာပဲ စားရပါတယ်။ ဘူတာရုံကို ရောက်တော့ ၇ နာရီ ကျော်ကျော်ရှိပါပြီ။ ရထားက ၈ နာရီ ၁၅ ထွက်ပြီး Chandigarh ကို မနက် ၆ နာရီခွဲလောက်မှာ ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
18 comments Labels: ခရီး, ကြည့်စရာ
ကိုယ်လည်း နတ်ဘုရား မဟုတ်လို့
သူ ထင်သလို မဟုတ်တာတော့
ကိုယ်က အိပ်မက် မမက်တတ်သူပါ
မင်းအိပ်မက်က မှားနေတယ် ဆိုတာ
ငါက လူတိုင်းကို ယုံကြည်ပေးချင်သူမို့
His feeling is very real or not?
I don’t know because I’m not the god…
My feeling is very real
But, I’m sorry,
It is not the thing he thought.
I’m notadreamer…
Even though my imagination is on the pages,
I can’t bring it to my life.
My heart is likeamarble.
I’ve already decided to worship the white color all my life.
Your dream is wrong.
It's the truth…
I want to believe everybody
So, I listened to your words.
My white heart doesn’t want to change its color…
It is the truth friend,
So, you have to accept it.
(English version ကတော့ မှားနေလည်း ပြင်ပေးပေါ့နော်..။ ခရီးသွားတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ တင်ချင်ပေမယ့် ဒီနေ့ connection မကောင်းလို့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ ရေးပြီး တင်လိုက်တာပါ..။ ပျင်းနေလို့ စာမရေးဖြစ်တာလည်း ကြာပါပြီ။)
10 comments Labels: ကဗျာ
ဒီတစ်ခါတော့ စာသားရေးရမှာ ပျင်းလို့ Adobe Premiere Pro နဲ့ သီချင်း ဗီဒီယိုလေး လုပ်ထားတာပါ...။ NineOne နဲ့ အိမ့်ချစ် တို့ ဆိုထားတဲ့ ကမ္ဘာငယ်လေး တဲ့...။ စာသားလေးတွေလည်း ကောင်းတယ်.. နားထောင်ကြည့်နော်...။
4 comments Labels: သီချင်း
တောင်တန်းပေါ်မှာ ခရီးသွားခြင်း (သို့) Shimla
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် စနေ နေ့ကတော့ Chandigarh ကနေ 104 km လောက် ဝေးတဲ့ Shimla တောင်ကို တက္ကစီနဲ့ သွားခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးပေါင်း ခုနှစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်နဲ့ အတူတက်နေတဲ့ မြန်မာ တစ်ယောက်ကလည်း မလိုက်ပါဘူး။ တစ်ချို့ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေကလည်း ဝေးတယ်.. မနက်စောစော ထရမှာ ဘာညာနဲ့ မလိုက်ကြပါဘူး။ (အစက ၆ နာရီ ခွဲ သွားဖို့ စီစဉ်ထားတာ ကားက မလာတာနဲ့ ၈ နာရီခွဲမှ သွားဖြစ်ပါတယ်)။ ယောက်ျားလေး လေးယောက် (မွန်ဂိုလီးယား ၁၊ အီဂျစ် ၂၊ နမီးဘီးယား ၁)၊ မိန်းကလေးက ကိုယ်ရယ်၊ ကျူးဘားက ၁ ယောက်၊ ဆူဒန်က ၁ ယောက် သုံးယောက်ပါ။
Shimla တောင်ဟာ အမြင့်ပေ နှစ်ထောင်ကျော်လောက် မြင့်ပြီး အိန္ဒိယ ရဲ့ နွေရာသီ အပန်းဖြေစခန်း တစ်ခုပါ။
Chandigarh ကနေ မနက် ၈ နာရီ ခွဲလောက် ထွက်ခဲ့တာ တောင်ခြေကို ၁၂ ခွဲလောက်မှ ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တောင်တက်လမ်းကို နောက်ထပ် ၃ နာရီလောက် ထပ်တက်ရပါတယ်။ ရာသီဥတုကတော့ မန္တလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင် ကွာသလိုပဲ ကွာပါတယ်။ နေ့ခင်းနေပူကျဲကျဲထဲမှာကို ရာသီဥတုက သိသိသာသာ အေးလာပါတယ်။ နေပူရှိန်ကြောင့် အနွေးထည် ဝတ်ရလောက်အောင် မဟုတ်ပေမယ့် မြေပြန့်နဲ့ မတူတာတော့ သိသာပါတယ်။
တောင်တက်လမ်းမှာ သွားနေတော့ မြန်မာနိုင်ငံက တောင်ကြီး၊ ပြင်ဦးလွင် သွားတဲ့ လမ်းတွေကို သတိရမိပါတယ်။ တောင်နံရံ တစ်ဖက်၊ ချောက်ကမ်းပါး တစ်ဖက် နဲ့ လမ်းကလည်း တစ်လမ်းသွားပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလမ်းမှာ ကုန်ကား အလတ်စားတွေလည်း သွားလာနေကြပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေလည်း ပြင်နေတုန်းပါ။ လမ်းက သိပ်မမတ်ပေမယ့် ကြောက်တတ်ရင်တော့ ကြောက်စရာ နည်းနည်း ကောင်းပါတယ်။
Shimla မြို့ရဲ့ ထူးခြားချက်က တောင်စောင်းတွေမှာ ဟိုတယ်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ လူနေအိမ်တွေ ဆောက်ထားတာပါ။ ကိုယ်တော့ အဲဒီလို ရှုခင်းမျိုး ခုမှ မြင်ဖူးတာပါ။ ဆောက်ထားတာကလည်း တစ်ထပ် နှစ်ထပ်တင် မကပါဘူး၊ အထပ်မြင့် တိုက်ခန်းတွေပါ။ အခုလည်း ဆောက်လက်စ တွေက ဆောက်နေဆဲပါပဲ။
တောင်တစ်ထပ် တက်လိုက်တိုင်း အပေါ်ဘက် တောင်စောင်းက တိုက်တွေ၊ တစ်ဖက်ခြမ်း တောင်စောင်းက တိုက်တွေကို မြင်နေရပါတယ်။
လမ်းကလည်း သွားရင်း သွားရင်းနဲ့ ဆုံးကို မဆုံးနိုင်တော့ သလိုပါပဲ။ မနက်ကတည်းက ထွက်လာကြတာမို့ နေ့ခင်းလောက်မှာ ရေချိုးခန်း ဝင်ချင်တဲ့ ပြဿနာကလည်း စလာပါတယ်။ ဆူဒန် မိန်းကလေးက အရေးပေါ်နေပြီ၊ Bath Room ရှာပေးလို့ အော်ပေမယ့် ဒရိုင်ဘာက ရပ်မပေးပါဘူး။ အနီးအနားမှာလည်း ဘာဆိုင်မှ မရှိတဲ့ နေရာ ရောက်နေပြန်ရော...။ Kufri ရောက်တော့မှာ ရောက်တော့မှာ ဆိုပြီး တကယ်တမ်းကျ ဝေးနေသေးပြန်ရော။ အဲဒါနဲ့ပဲ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုကို တွေ့တော့ ဝမ်းသာအားရ ဝင်ကြရပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုင်က အိမ်သာ ဆိုတာလည်း ညစ်ပတ်နေပြန်ရော...။
Shimla လမ်းဆုံးကို မရောက်ခင် Kufri Resort ကို ခဏ ဝင်ပါတယ်။ Nature Park တော့ ရှိပေမယ့် အတွင်းကိုတော့ မဝင်ခဲ့တော့ပါဘူး။ တစ်ခြားတော့ လက်ဆောင်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် တစ်ချို့နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
တိုက်ခန်းတွေ မရှိတဲ့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ သဘာဝ ထင်ရှူးတောတွေပါ...။ တောင်အနိမ့်ပိုင်းတုန်းက ထင်ရှူးပင်တွေက တစ်မျိုး...။ တောင် အမြင့်ပိုင်းကျတော့ ထင်ရှူးပင်တွေက တစ်မျိုးပါ။ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့တဲ့ ထင်ရှူးပင် အကြီးကြီးတွေလည်း အများကြီးပါ။ Shimla တောင်ဟာ ဟိမဝန္တာတောင်ရဲ့ အနိမ့်ပိုင်း တောင်တန်း တစ်ခုပါ။
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလည်း တောင်တွေ များပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ တောင်တွေကို ကြည့်ရတာ သဘောကျပါတယ်။ တောင်တန်းတွေဆီ သွားရတာကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ မျှော်လင့်သလောက်လည်း ရှုခင်းကောင်းကောင်း မတွေ့ရ၊ လျှောက်သွားစရာလည်း နေရာ သိပ်မရှိတော့ လာမိတာ မှားတယ်လို့တောင် ပြောကြပါတယ်။ ကိုယ်တို့ မျှော်လင့်တာက google မှာ ရှာကြည့်လို့ တွေ့ထားသလို အပေါ်ယံ တောင်ထိပ်ပိုင်းမှာ နှင်းဖုံးနေတဲ့ တောင်ကြီး တစ်ခု တွေ့ရမယ်လို့ ထင်ထားကြလို့ပါ။ အခုက ဆောင်းတွင်း မရောက်သေးလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်တို့ရောက်ခဲ့တာက ကားလမ်း ရှိတဲ့ နေရာလောက်ပဲမို့ တောင်လည်း မတက်ခဲ့ရတာနဲ့ သိပ်လှတဲ့ ရှုခင်းမျိုး မတွေ့ခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃ နာရီခွဲလောက် မှာ Shimla ဟာ ဒါပဲ လို့ တက္ကစီသမားက ပြောတော့ လမ်းပေါ်မှာပဲ ခဏရပ်၊ ဓါတ်ပုံလေး ဘာလေး ရိုက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြရတာပါ။ ညအိပ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပဲ နေ့ချင်းပြန်မှာမို့ ဘယ်မှ လျှောက်သွားဖို့လည်း အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ အဲလို ချက်ချင်းပြန်တာတောင် ဟိုတယ်ကို ည ၉ နာရီ ထိုးကာနီးမှ ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ညစာကိုတော့ လမ်းက Macdonald မှာ စားခဲ့လို့ တော်ပါသေးရဲ့။ ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ညစာမရှိတော့ပေမယ့် Ice Cream လေးတော့ စားလိုက်ကြပါသေးတယ်။
ရိုက်ခဲ့တဲ့ ရှုခင်းပုံ အများစုကလည်း ကားပေါ်ကနေ လှမ်းရိုက်တာပါ။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကားခဏရပ်ပြီး ဆင်းရိုက်ကြပါတယ်။ Google မှာ ရှာကြည့်ထားသလောက်တော့ ပုံကောင်းကောင်း မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကတော့ တောင်တန်းပေါ်မှာ ခရီးသွားရတာကိုပဲ တော်တော် သဘောကျခဲ့ပါတယ်။
16 comments Labels: ခရီး, ကြည့်စရာ
ဒီသီချင်းလေးကို ကြိုက်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်တဲ့ စမ်းထားတဲ့ flash file လေးပါ။ သိပ်တော့ လက်ရာမမြောက်သေးတာလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိပါတယ်...။ သည်းခံပြီးတော့ ကြည့်ပေးပေါ့နော်..။
13 comments Labels: သီချင်း
ကောင်မလေး အတွက် ၃
မတူညီတဲ့ အိပ်မက်တွေ မက်ခဲ့သူတွေပါ။
6 comments Labels: ကဗျာ
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အတွက် အချက် ၂၀
လက်ထပ်ခြင်း၏ နောက်ပိုင်း စာမျက်နှာများ